Nhau - Chii chekuteerera kana uchiisa iyo humburumbira musoro gasket
Synthetic rubber inogona kuchinja maitiro ayo semvura. Ehe, haigone kuyerera. Kana simba rekusvina rinomanikidza kushanduka kwaro rikanyangarika, rinogona kudzokera pachimiro charo chepakutanga (kureva kuti, iro gasket harichinje panguva yekumanikidza. Shanduko, inoratidzwa nehukuru hwekumanikidza shanduko).
inofanira kunge iine simba rakakwana kuti ridzivirire simba rinosvinwa rinoita kuti ipinde munzvimbo yakavharika uye kumira yakasimba-yekumanikidza mvura yepakati (ndokuti, masimba epanyama erabha gasket senge tensile simba uye tensile simba).
Nekugadzirisa fomura, haigone chete kuwana simba rakaringana rekushandisa, asi zvakare iine kukwana kwakaringana, kuitira kuti igone kunamatira padanda resimbi pasi pekumanikidzwa kwakakodzera, nokudaro ichiburitsa yekuisa chisimbiso basa (gasket chimiro uye yekuisa chisimbi ndiro Chimiro iyo grooves inoenderana).
4. kupinda kwemushonga
Iwo matatu-mativi polymer network dhizaini yekuita yerabha inogona kuramba kupinda kwezvinwiwa zvine akasiyana makemikari zvivakwa (midhiya kuramba).
5. kupisa kupisa
Irabha iri muzvinhu zvepolymer ine kusagadzikana, ndokuti, ichaita kuti zvese zvekugadzira zverubber zvigadzirwa zvive zvinokodzera chete kune yakamanikana tembiricha renji maererano neyakaomarara tembiricha. Naizvozvo, zvakakosha kuti usarudze zvakanyatsonaka fomura maererano netembiricha inodiwa kuti ushandise. .
6. Hupenyu hwebasa
Zvakawanda zvitsva zvekugadzira zvinhu zvine hunhu hwehupenyu hwakareba hwebasa zvichienzaniswa neyekare mhando mhando. Izvi zvinokonzerwa nekushandiswa kwezvitsva zvekuwedzera kuwedzera hupenyu hwebasa. Panyaya iyi, sarudzo chaiyo yekuumbwa kwezvinhu zvakagadzirwa zvakakosha. Zvese zverubber-based synthetic zvinhu zvinosangana nekushushikana kuzorora. Munguva yekushandisa, nekuda kwekuchinja kwemakemikari mukati mezvinhu zvekugadzirwa, iko kwekutanga kwekuisa chisimbiso basa kunodzikira zvishoma nezvishoma, uye kana iko kuiswa kwekusimbisa kwakaderera Panguva shoma, kudonha hakudzivisike.
Yantai Ishikawa Kuisa Sekinoroji Technology Co, Ltd. inonyanya kugadzirwa nekushanda kwemhando dzakasiyana dzekuisa chisimbiso, humburumbira gaskets, gaskets, uye kupisa nhovo. Ndiyo mutevedzeri wasachigaro unit yeChina Friction uye Sealing Materials Association uye sachigaro unit yeMulti-humburumbira Diesel Injini yeKanzuru yeInternal Combustion Engine Association. Iyo ndeimwe yemakambani makuru epamba anoshanda mukugadzirwa kwezvisimbiso zvigadzirwa.